I-JustUnfollow: Phatha, Yeka futhi uthole Abalandeli be-Twitter | Martech Zone
I-JustUnfollow: Phatha, Yekela futhi Uthole Abalandeli be-Twitter
NgeSonto, uJanuwari 26, 2014 Douglas Karr
Kulabo kini abaku-Twitter, sisadlala umdlalo ongenangqondo wabalandeli mbumbulu, umlandeli we-SPAM, nabantu abakulandelayo nabangakulandeli ukuze bamane bazame ukukuyenga ukuthi ubalandele ukuze bakhulise inethiwekhi yabo. Ngisayithanda iTwitter kepha lolu uhlangothi olwesabekayo lweplatifomu - angicabangi ukuthi iTwitter yenza okwanele ukuphatha i- izinga yesikhulumi.
Ithuluzi ebengilisebenzisa izinyanga ezimbalwa manje yilona Justunfollow:
Kunezici ezintathu ezibalulekile engizithandayo kungxenyekazi yazo:
Ukulandela ukulandela abangalandeli - ukukhomba abantu abangilandele ebengibalandele. Ngithanda ukuba nezingxoxo ku-Twitter futhi ngabelane ngolwazi nabantu… Angizukulandela abantu abangangilandeli.
Ukusesha kwe-Hashtag - Ngisebenzisa i-hashtag search, ngingathola futhi ngilandele ama-akhawunti anezintshisakalo ezifanayo. Isibonelo esihle sale bhulogi ukuthola izinsiza zokumaketha ze-infographic.
Kopisha Okulandelayo - kukhona abantu laphaya abalandela izimbangi zakho noma amasayithi afana nelakho. Ungalandela abalandeli babo ngethemba lokukhulisa okulandelayo.
Uhlu olumhlophe nohlu lwabamnyama - kukhona amanye ama-akhawunti okufanele uwalandele noma engalandeli emuva. Futhi kukhona abanye ongeke ufune ukulandela futhi ngemuva kwe-tweet enokhahlo noma engafanele. Kuhlanganiswe nezinye, lokhu kungaba isici engisithandayo!
I-JustUnfollow nayo ine- isicelo mobile. Udaba olulodwa olungakukhubaza mayelana nensizakalo ukungakwazi ukulandela ngobuningi noma ukulandela… lelo akulona iphutha labo, kungenye imikhawulo ye-Twitter ne-API yayo. Kufanele uchofoze ngokuzimela ukulandela ngakunye noma ungalandeli.
Tags: abalandeli abamnyamathola abalandelikhula abalandeliukusesha kwe-hashtagvele ulandeleTwitterabalandeli abamhlophe
IBig Cartel: I-ecommerce yabaculi
Jan 27, 2014 ku-12: 57 AM
Siyabonga ngokubhala nge-JustUnfollow. Siyajabula uthola ukuthi uhlelo lokusebenza luwusizo!
Isihleli Sokuqukethwe, JustUnfollow